गेडागु'डी विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । यो हाम्रो भान्सामा पाकि'ने तरकारी पनि हो । गेडागुडी स्वा'दका लागि मात्र नभई स्वास्थ'का लागि पनि उतिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। गेडागुडीको रस खानाले हा'म्रो शरीरमा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ । यो जो कोहिले पनि खान सक्छ य'सको से'वन गर्नाले रो'ग संग लड्ने क्षमता बृदि हुन्छ । गेडागुडी भन्ना:ले विभिन्न प्रका:रका दाल, सिमी, चना, केराउ, राज्मा, भटमास आदि'लाई बुझाउँछ । अझ बढी टुसा उम्रेको गेडागुडिमा प्रोटिन र फाइबरको मात्रा बढी हुन्छ । यद्यपि, टुसाएर गेडा:गुडी प्रयोग गर्दा श'रीरले यसमा भएका सबै प्रोटिनलाई सोस्न सक्छ । नियमित नभिजाएको गेडागुडी प्रयोग गर्दा आइरन, जिंक, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम'लगायतका एन्टिन्युट्रिसन तत्वलाई यसले सोस्न दिँदैन ।
मुलुक'मा थप १ हजार १ सय ५४ जनामा कोरो'ना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि भए'को छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भा'गमा १ हजार १ सय ५४ संक्रमित थपिएसंंगै नेपाल'मा संक्र'मितको कुल संख्या ६५ हजार २ सय ७६ पुगेको छ । मन्त्राल'यका अनुसा&र प्रदेश १ को इलाम र उदयपु:रमा १-१ जना, झापामा २ जना, मोरङमा १ सय ७ जना र सुनसरीमा ११ जनामा संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ को धनुषा&मा २ जनामा पुष्टी भएको छ, पर्सामा ५ जना, बा'रामा १ जना, महोत्तरी'मा १४ जना, रौतहटमा २९ जना, सप्तरीमा ४७ जना, सर्लाही&मा ७ जना र सिरहामा ४ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यता, वागमती प्रदेशको काठमा'डौँमा ५ सय ३८ जना, काभ्रेमा १० जना, दोलखा&मा ३ जना, धादि'ङमा ६ जना, नुवाकोटमा ५ जना, भक्तपुरमा ७४ जना, मकवानपुरमा ३ जना'मा पुष्टी भएको छ, ललितपु'रमा ६२ जना, सिन्धुपाल
आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस् जिल्लागत विवरण
मुलुकमा आज थप १ हजार २ सय ४ जनामा को'रोना भाइरस कोभिड १९ संक्रम'णको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जन'संख्या मन्त्राल'यका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा दे'शका बिभिन्न भागमा १ हजार २ सय ४ संक्र'मित थपिएसंंगै नेपा'लमा संक्रमि'तको कुल संख्या ६२ हजार ७ सय ९७ पुगेको छ । मन्त्राल'यका अनु'सार प्रदेश १ को ओल'खढुंगामा ३ जना, खोटाङमा १ जना, झापामा ६ जना, मोरङमा ३३ जना, र सुनस'रीमा २३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ को ध'नुषामा २ जना, पर्सा'मा ६ जना, बारामा १ सय ११ जना, महोत्तरीमा १ जना, रौतह'टमा २ जना, सप्तरीमा १९ जना, सर्लाहीमा १५ जना र सि'रहामा ८ जनामा संक्र'मण देखिएको छ । यता, वागम'ती प्रदेशको काठ'माडौँमा ५ सय ७० जना, काभ्रेमा १४ जना, चित'वनमा ७ जना, दो'लखामा ५ जना, धादिङमा १३ जना, नुवाकोटमा ४ जना, भक्तपुरमा ८३ जनामा' पुष्टी भएको छ, मकवानपुरमा १८ जना, रामे'छापमा ९ जना, ललि'तपुरम
आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? जिल्लागत विवरणसहित
मुलुकमा थप १ हजार २ सय ४६ जनामा को'रोना भाइरस कोभि'ड १९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय'का अनु'सार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भागमा १ हजार २ सय ४६ संक्रमित थ'पिएसंंगै नेपालमा संक्रमित'को कुल संख्या ५९ हजार ५ सय ७३ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ को उदयपु'रमा १ जना, खोटाङमा १ जना, झापामा ११ जना, धनकुटामा १ जना, मो'रङमा ९४ जना र सुनस'रीमा ५४ जनामा संक्र'मण देखि'एको छ । त्यस्तै प्रदेश २ को धनुषा'मा १६ जना, पर्सामा १९ जना, बारामा १० जना, महोत्तरीमा ४ जना,रौतहटमा ७ जना, सप्तरीमा ९ जना, सर्लाहीमा ११ जना र सिर'हामा ११ जनामा संक्र'मण देखिएको छ । यता, वागमती प्रदेशको काठमा'डौँमा ५ सय ७ जना, काभ्रेमा २ जना, चितवनमा १०१ जना, दोल'खामा ३ जना, धादिङ'मा २ जना, नुवाकोट'मा १ जनामा पुष्टी भएको छ, भक्तपुरमा ५० जना, मक'वानपुरमा ६३ जना, रामे'छापमा १ जना, ल
काँचो प्याज खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा – सबैले एकपटक पढ्नुहोस्
भान्सामा दैनिक रुप:मा प्याज प्रयोग हुन्छ। कति:पयले तरकारी–अचारमा प्याज हाल्छन् त क'तिले सलादको रुपमा काँ'चै खान मन पराउँछन्। खासमा प्याज काँचै खा'नु बढी फाइदाजनक हुन्छ। काँचो प्याजले कैयौं मौसमी बिरा:मीबाट बचाउन सहयो'ग पुग्छ। साथै तपा'ईंको सुन्दरतामा पनि काँचो प्याजले निखारता ल्याउँछ। यस्ता छन् काँचो प्याजका खास ५ फाइदा - प्या:जमा पाइने फस्फोरस, म्याग्नेसियम, पोटा'सियम र भिटामिन सी ले हाम्रो शरीरलाई निरो'गी बनाउन मद्दत पुग्छ। दिउँसोको खानाको साथमा सलादको रुपमा काँ'चो प्याज खाँदा पाच'न शक्तिमा सहयोग पुग्छ। -श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट बच्न पनि प्याज लाभदायी छ। प्याजले शरीरमा रक्तसञ्चार प्रवाह निय'मित बनाइराख्न र शरीरमा ऊर्जा दिने काम गर्छ। - काँचो प्याजले एन्टिब्याक्टेरि'याको पनि काम गर्छ। यसले हाम्रो शरीरमा ब्याक्टे'रिया र भाइरसलाई' बढ्न दिँदैन। साथै रु'घा लाग्नबाट पनि हाम
तपाईंको घाँटी दुख्छ भने थाहा पाउनुस् : यस्ता कारण र उपचार
घाँटी को दुखाई (फयारेंजैटिस र टन्सिलाइटिस) घाँटी र गला को तह को सूज'नबाट हुने पीडा, जलन र चिला'उने समस्या सँग सम्बन्धित हुन्छ । यो प्रायजसो बाल'बालिका मा हुने संक्रमण को कारण ले हुने भएता पनि अरु उमेरका व्यक्तिलाई अरु कारण'हरु ले पनि हुने सम्भावना हुन्छ ।घाँटीको खसखस, घाँटीमा ग्रन्थी'हरू सुन्निनु, दबि'एको आवाज, निल्न गाह्रो र कण्ठनलीमा सेता धब्बाहरू निस्कनु य'सका लक्षण हुन् । घाँटी दुखेका व्यक्ति'हरू ले ज्वरो, ठंडी, शरीर दुख्ने, टाउको दुख्ने, खोकी र नाक बाट पानी बग्ने जस्ता अन्य लक्षण'हरू पनि अनुभव गर्न सक्छन् । घाँटी दुखनु सामा:न्यतयाः भाइरस को संक्रम:ण बाट हुने गर्दछ र कम समय को लागि हुनु:का साथै घरेलु उपचार बाट निको पनि हुन्छ । तथापि'व्याक्टेरिया ले गर्दा घाँटी'को संक्रमण भए'मा पीप पनि जम्न सक्दछ जसको उपचार एन्टिबा'योटिक बाट गर्नुपर्दछ । केही स्ट्रेप्टोकोक'सब्याक्टेरिया का क
दुःखद खबर- कोरोनाबाट नेपालमा आज एकैदिन १२ जनाको मृ’त्यु
नेपालमा कोरोना भाइर'सबाट मृ त्यु हुनेको संख्या २ सय नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२ जनाको मृ त्यु भएसँगै संख्या २ सय ७ पुगेको हो । वीरगञ्जमा मृ त्यु हुनेमा वीरगन्ज महानगरपालिका–१२ मुर्ली निवासी ६५ वर्षीया महिलाको मृ त्यु भएको छ । उच्च रक्त'चापको समस्याबाट पीडित महि'लामा वाइड जीन एक्सपर्ट विधिबाट परीक्ष:ण गर्दा कोरोना देखि'एका थियो । यस्तै, वीरगञ्ज–१२ निवासी ४३ वर्षीय पुरुषको वीर'गञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा मृ त्यु भएको छ । हेपाटा'इटीस बी र एचआइभी एडु्का बिरामी समे'त रहेका उनलाई ने'सन मेडिकल कलेज'बाट रिफर भएर अस्पताल आएका थिए । यस्तै, वीरगञ्ज–२२ मनि'यारीका ३७ वर्षीय पुरु'षको पनि मृ त्यु भएको छ । सिकिस्त बिरामी रहेका उनलाई काठमाडौं लैजादै गर्दा मृ त्यु भएको छ । यस्तै, धरानको वीपी को'इराला स्वास्थ्य विज्ञा'न प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचाररत ८४ वर्षीय कोरोना संक्रमितको शुक्रब
जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जे आवे अस्पताल भर्ना
जापानका प्रधान'मन्त्री सिन्जे आवे अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । उहाँ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुभए'को प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिका'रीहरुले जानकारी दिएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री अकिरा अ'मारीले एउटा टिभी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई आरामको आवश्यकता भएको ब'ताएको भोलिपल्ट उहाँ अस्पताल जानुभएको हो । क्योदो समाचा'र संस्थाले उहाँ राजधानी टोकि'योस्थित केइओ विश्वविद्यालय अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको जनाएको छ । प्रधानम'न्त्री आवेलाई अहिले तत्काल ख्याल नगरेमा पछि अरु ठूला समस्याहरु आउन सक्ने उहाँले चेता'वनी दिनुभएको थियो । तर उहाँकै कतिपय सहयोगी तथा मन्त्रीपरिषद्का सहया'त्रीहरुले भने प्रधानमन्त्री आवेले राम्रोसँग काम गरिरहेकाले स्वास्थ्यमा स'मस्या भएजस्तो नभएको उल्लेख गरेका छन् । “उहाँले राम्रो काम गरि'रहनु भएको छ, त्यसमा कुनै समस्या भएजस्तो लाग्दैन,” सरकारको मन्त्रीपरिषद्का मु
नेपालीहरुमा ग्यास्ट्रि'कको समस्या अत्यधिक देखिन्छ। हाम्रो जीवनशै'लीमा निश्चित समय तालिका नहुँदा पनि यो रोगका बिरा'मीहरु बढिरहेका छन्। ग्यास्ट्रिकका बिरामीले खानुपर्ने ६ खा'नेकुरा यस्ता छन्। कागती पानी – पेटमा धेरै ग्यास भएको अवस्थामा कागती पानी पिउने। यसले ग्यास हटा'उने का'म गर्छ र पेट फुल्न दिँदैन। खाली पेटमा कागती पानी खा'नाले पेटमा ग्यास कम हुन्छ। - कार्बोहाइड्रेट कम खाने – पे'टमा ग्यास जमेर पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले बियर, वाइन, मकै, राजमा, बन्दा, प्याज'जस्ता खानेकुराबाट टाढै बस्नु उप'युक्त हुन्छ। - दूध नपिउने – ग्यास्ट्रिक भए'कालाई दूधले फाइदा गर्दैन। पचाउन गाह्रो पर्ने भए'काले दूध नखानु नै बेस हुन्छ। यस'को सट्टा दही र अन्य दूधबाट बनेको परि'कार खानु राम्रो हुन्छ। -प्रशस्त पानी पिउने – लगा'तार पानी पिउँदा पेटमा ग्यास जम्मा हुन पाउँदैन र जिउमा समेत पानीको सन्तु'लन कायम राख्छ। तर प
यसरी लगाउनुहोस् मेहन्दी, तरिका सहित
हरेक मा'निसमा आफु राम्रो र सुन्दर देखिने चा'हाना हुन्छ । त्यसैले मानिस बिभिन्न सौन्दर्य साम'ग्रीको प्रयोग गर्ने र सुन्दरतामा ध्यान दिने गर्दछन् । तर कतिपय अवस्था'मा सही ज्ञान नहुदाँ मेकअप सामग्री कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जान'कारी हुदैन । यस्तोमा ती सामग्रीको गल'तप्रयोग भएमा सौन्दर्यता बिग्रने खतरा हुन्छ । आज हामी कसरी कपाल रंग्याउने भन्ने बारे जान'कारी दिदैछौ । - कपा'लमा मेहेन्दी लगाउनु अघि टाउको'लाई मज्जाले सैम्पुले धुनु पर्दछ । - टाउको पखाल्दा सकेसम्म साबु'नको प्रयोग गर्नुहुदैन । - सैम्पु गरिसकेपछि कपाल'लाई मज्जाले सुक्न दिनु पर्दछ । - त्यसपछि मेहन्दिका प्याके'टको निर्देशन अनुसार सफा कचौ'रामा मेहन्दी तयार पार्नुपर्दछ । - मेहन्दिको लेप बनाउन प्याके'टमा उल्लेखित मात्राअनुसार ठिक्क पानीको प्रयोग गर्नुपर्दछ । - त्यसपछि मेहन्दीलाई ब्रसले मजा'सँग फिट्नु पर्दछ । मेहेन्दी
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (114972)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81141)